Gbasara Anyị - Marst Safety Equipment (Tianjin) Co., Ltd.
Uru na ikike
Ịkwanyere Tags na Warning ịrịba ama
Safety gbachiekwa ogbe
Wall nọkwasịrị n'ịnyịnya na Eye Saa
Guzosie Eye Saa
Nchikota Eye Saa
Bọmbụ gbawara agbawa Gosiri na USB Njọ Ifriizi eguzogide ọgwụ Eye Saa & ịsa
ABS Eye Saa
Portable Eye Saa
Otito Response Portable Decontamination ịsa
Oche nọkwasịrị n'ịnyịnya na Eye Saa
Pu Ọgwụ Machine
Fast Welt Cotton-ejuputa Machine
Akpụkpọ ụkwụ Ire labeling Machine
Igwe nkpuchi ume iku ume
Nkwado & Service
Na àgwà iji merie ịtụkwasị obi, sayensị na teknụzụ iji merie ọdịnihu
Gbado anya na R & D, mmepụta na ire ere nke ihe nchedo onwe onye
Marst Safety Equipment (Tianjin) Co., Ltd bụ ọkachamara emeputa na-elekwasị anya na R&D, mmepụta na ahịa nke onwe-echebe ngwá. Anyị jidere echiche nke "Site na iji merie ntụkwasị obi, sayensị, na teknụzụ iji merie ọdịnihu" ma lekwasị anya na ụlọ ụlọ na ngwaahịa ọhụụ. Site na ikike inwe ikike ọgụgụ isi na ndị ọrụ R&D ọkachamara, anyị raara onwe anyị nye inye ndị ahịa ọrụ dị mma na otu nkwụsị maka nchekwa nchekwa onwe onye.
Ná mmalite nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke e guzobere na 1998, ụlọ ọrụ anyị na-emepụta akpụkpọ ụkwụ na okpu agha, n'otu oge ahụ, anyị mepụtara, mepụta ma ree mkpọchi nchekwa na ebe a na-asacha anya. Na 2007, ngwaahịa anyị banyere ahịa mba ofesi. N'ime afọ 20 'mmepe, Anyị ndị nkesa na-agbasa n'elu Beijing, Tianjin, Shanghai, Northeast, Northwest, Southwest, North, East na South China na ndị ọzọ na isi akụkụ nke China. Mgbe afọ asatọ nke R & D, n'ụzọ zuru ezu akpaka nwere ọgụgụ isi akpụkpọ ụkwụ Ndinam igwe nwere onwe ha arịa amamihe ikike na integrates elu arụmọrụ na ọgụgụ isi. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị ọrụ iji belata ụgwọ ọrụ, melite ogo ngwaahịa, ma ghọta nkwalite ụlọ ọrụ. Company'slọ ọrụ ụlọ ọrụ anyị na ihe mgbochi na ihe ọghọm bụ akara maka mmanụ na mmanụ ala, nhazi igwe, igwe elektrọnik na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Anyị na-a attentiona ntị na uru ndị ahịa ma na-etinye aka na ngwaahịa na ọrụ na-aga n'ihu.
Ahịa & Asambodo
Companylọ ọrụ anyị bụkwa ndị na-ebu ngwaahịa ndị China nke Mere-in-China na Alibaba. Ruo ihe karịrị afọ 20, anyị ejiriwo ike mee ka nkwado nke ndị ahịa si mba dị iche iche sikwuo ike site na ngosipụta ọkachamara zuru ụwa ọnụ emere na Germany, United States, na ebe ndị ọzọ. Anyị na ngwaahịa na-exported karịa 70 mba na mpaghara dị ka South America, North America, Europe, Asia, Africa, na Middle East. Anyị ụlọ ọrụ mechaa ISO9001 quality management system, ISO14001 gburugburu ebe obibi management usoro, ISO45001 ọrụ ahụ ike, na nchekwa management usoro asambodo, na nwere 12 mepụtara Ikike nchọpụta Kemịkalụ, 38 na ịba uru nlereanya nchọpụta Kemịkalụ na 13 imewe Ikike nchọpụta Kemịkalụ. Ngwaahịa ndị nwere asambodo EU CE, asambodo ANSI. Anyị na-agbasi mbọ ike imepụta ọkwa dị iche iche nke ụwa ma nye nchekwa na nchekwa ebe ọrụ maka ndị ahịa karịa!
Na 2019 ụlọ ọrụ anyị nwetara nzụlite na-aga n'ihu ma guzobe ụlọ ọrụ sayensị na teknụzụ, nke na-ejikọ R&D, mmepụta, ahịa na ọrụ teknụzụ. Ọ nwere ngalaba azụmahịa ise: mkpọchi nchekwa, ebe a na-asacha anya, njem nchekwa, igwe nwere ọgụgụ isi na igwe nri.
Chineke na-enyere ndị na-enyere onwe ha aka aka aka; ezigbo omume nwere ike iburu ihe niile. Na ihe mgbaru ọsọ nke na-aga n'ihu mma na kasị mmepe, Marst Safety Equipment (Tianjin) Co., Ltd a raara nye enye ọzọ àgwà nchekwa ngwaahịa maka anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na ndị ahịa.
Company: Akụrụngwa Nchedo Marst (Tianjin) Co., Ltd.
Ekwentị: + 86-22-28577599
N'otu na-arụ: + 86-13114933958
Copyright - 2010-2020: All Rights echekwabara. - Ike site Globalso.com